Wajiga koowaad ee tirakoobka shaqaalaha Puntland oo Maanta la soo gaba-gabeeyay – Radio Daljir
Juunyo 6, 2015 3:28 b 0
Sabti, Juun 06, 2015 (Daljir) —Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta oo ay taariikhdu tahay 6-6-2015 ka qeyb-galay xafladda xiritaanka wajiga koowaad ee tirakoobka iyo diiwaangelinta shaqaalaha dawladda Puntland iyo daahfurka wajiga labaad.
Hadafka laga leeyahay dib u eegista iyo habaynta maamulka shaqaalaha dawladda Puntland wuxuu ku salaysan yahay in qofkasta oo kamid ah shaqaalaha dawladda uu helo aqoonsi iyo macluumaad la xiriir sida go\_’aanka shaqaaleynta , dalacsiinta, fasaxyada. anshaxmarinta , ruqsaynta , geerida iyo wixii lamid ah .
\_’\_’ Waa muhiim in lahelo tirada saxda ah ee shaqaalaha dawladda lagana warhayo habka ay u shaqeeyaan , hadana waxaa noo soo dhammaaday wajigii koowaad ee ahaa in tirada saxda ah ee shaqaalaha dawladda la helo \_’\_’ Ayuu yiri Madaxweyne Gaas.
Madaxweyne Gaas ayaa guud ahaan shacabka reer Puntland ugu bishaareeyey in dhawaan la soo dhisi doono hay\_’adda tababarka shaqaalaha oo la rajeynayo in shaqaalaha Puntland aysan meel kale u aadin tababar, aqoontoodana kor loogu qaadayo dalka gudihiisa.
DHAGAYSO: Barnaamijkii Saaka iyo Dunida _Sabti_06